भवानीपुरको भीड र आजको कांग्रेस
भर्खर हेटौंडामा सम्मेलन गरेको नेपाली कांग्रेसको भीड देख्दा लाग्यो, भारतको भवानीपुरमा गठन भएको कांग्रेस अहिले पनि भीडमै सिमित छ । यसमा राजनीतिप्रतिको गम्भीरता देखिन्न । हुन त मास बेश पार्टीमा भीड देखिन्छ तथापि भर्खर चुनाव हारेर बेहोस अवस्थामा भएको कांग्रेस किन चुनाव हारियो, कारण र त्यसको निराकरण के हुनसक्छ ? गुटबाजीको अन्त्य र एक ढिक्का हुने सूत्र के हो ? चुक कहाँनेर भयो र चुक सुधार्ने कसरी ? यसरी गम्भीर छलफलमा जुटेर पार्टीलाई पार्टीजस्तो र सुधार्नुपर्ने नीतिदेखि नैतिकतासम्मका विषयमा कांग्रेसले छलफल नै गरेनन् । एकदोस्राप्रति तिक्तता पोख्नु र आत्मरती गर्नुमा कांग्रेसको भेला सकियो, सभापति दङ्ग परेको देखियो ।
सन १९५० मा नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस र नेपाल प्रजातान्त्रिक कांग्रेसको एकीकरणपछि नेपाली कांग्रेस बनेको थियो । मातृकादेखि चलेको कांग्रेसका सातौं सभापति शेरबहादुर देउवा हुन् । यति पुरानो पार्टी पाटीजस्तो अवस्थामा पुगेको छ । नेपालको एउटा समाजवादी जनवादी राजनीतिक दल जो समाजवादी इन्टरनेशनलसँग समेत आवद्ध छ, त्यस्तो पार्टीलाई दुई कम्युनिष्ट पार्टी मिलेर चुनावमा अस्तव्यस्त, ध्वस्त पारिदिए । तैपनि कांग्रेसमा सद्बुद्धि देखिदैन ।
भनिन्छ, ठुटो भए बुटो पलाउँछ । कांग्रेस बिग्रिएको सत्तामा हुँदा अतिराजनीतिकरण, शक्तिको दुरुपयोग, संवैधानिक पदहरुसमेत विक्री गर्ने व्यापारिक नीति, चुनावका बेलामा उमेदवारको टिकटसमेत विक्री गर्ने र स्पष्ट घोषणापत्र जारी गर्न नसक्दा कांग्रेसको यो दयनीय हालत भएको हो ।
कांग्रेस सुध्रिन सक्छ । सुधार्‍यो भने फेरि जनताको समर्थन पाउन सक्छ, जनतामा बिझाएका कुरामा सतर्क रहने र हिन्दु राष्ट्र तथा राजतन्त्रवादलाई स्पष्ट नीतिका रुपमा अलवम्बन गर्ने हो भने कम्युनिष्टको शासन यही पाँचवर्षमात्र हुनसक्छ । त्यसपछि कांग्रेस पलाउन सक्छ, बौरिनसक्छ ।
कांग्रेसलाई भोटको कमी छैन, समर्थकको कमी पनि छैन । कमी छ त नीति र नैतिकताको । नेतामा नैतिकता र पार्टीको स्पष्ट नीति हुने हो भने नेपाली कांग्रेसको विकल्प कम्युनिष्ट हुनसक्दैन । अहिले जो देखिएको छ, त्यो कांग्रेसी नेताहरुको गलत क्रियाकलापको दण्डमात्र हो ।